महासचिवमा पदमा डा. रिजालले उम्मेदवारी दिनुहुने – Samacharpati
महासचिवमा पदमा डा. रिजालले उम्मेदवारी दिनुहुने
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । चिकित्सकको साझा छाता सङ्गठन नेपाल चिकित्सक सङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्वका लागि महासचिव पदमा डा बद्री रिजालले उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ । आगामी माघमा सङ्घको नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, महासचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, सहसचिव एक, सहकोषाध्यक्ष एक र सदस्य छ पद गरी कूल १३ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । लोकतान्त्रिक चिकित्सक सङ्घको सोमबार बसेको बैठकले उहाँलाई सो पदमा उठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सङ्घको अध्यक्ष पदमा डा लोचन कार्कीलाई उठाउने निर्णय भएको थियो । डा कार्की सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ । सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित पूर्वअध्यक्षहरु डा केदारनरसिंह केसी, अञ्जनीकुमार झा र चोपलाल भुसालसहितको टोलीले सर्वसम्मतरूपमा महासचिव कार्कीलाई अध्यक्षसहित रिजाललाई महासचिव पदमा उठाउने निर्णय गरेको जानकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले दिनुभयो ।
यसैगरी दुईवटा उपाध्यक्ष पदमा डा शिवकुमार श्रेष्ठ र डा अनिलविक्रम कार्की, सहसचिव पदमा चिकित्सक प्रकाश बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष पदमा चिकित्सक शिवजी पौडेल र सहकोषाध्यक्ष पदमा डा विश्वराज दवाडीलाई उठाउने निर्णय भएको छ । बाँकी कार्यसमितिको सदस्य पदको टुङ्गो छिट्टै लगाइने लोकतान्त्रिक चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ । यसअघि डा पुष्पमणि खरालले अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभएको छ । विसं २००७ फागुन २० गते नेपाल डा सङ्घको स्थापना भएको थियो । स्थापना समयदेखि हालसम्म सङ्घको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक चिकित्सकले गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच सङ्घले आज सूचना जारी गरी केन्द्रीय निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत मङ्सिर १४ गते शनिबारसम्म सङ्घको आजीवन सदस्य बन्नुपर्ने, मतदाताको नामावली मङ्सिर २३ गते सोमबार प्रकाशित हुने, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता मङ्सिर २७ र २८ गते १ बजेसम्म हुने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन मङ्सिर ३० गते सोमबार हुने जनाइएको छ । सङ्घको १६ वटा शाखा कार्यालयमा माघ ४ गते शनिबार र ५ गते आइतबार बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म र केन्द्रीय कार्यालयमा माघ १७ गतेदेखि २१ गते मङ्गलबारसम्म सोही समयमा गोप्य मतदान हुने सूचनामा जनाइएको छ । मतगणना माघ २२ गते बुधबार ११ बजेपछि हुनेछ । सङ्घको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा डा बाबुराम मरासिनी र निर्वाचन अधिकृतमा डा नवीन्द्रराज विष्ट र डा योविनकुमार यादव रहनुभएको छ ।
‘मिस्टर वल्र्ड २०१९’मा नेपालका अक्षयले प्रतिनिधित्व गर्ने
सुमन श्रापित एकल साँगीतिक साँझ सम्पन्न
हिसान कास्की आइडलको अडिसन राउण्ड सम्पन्न